Mutungamiri weAnglican Church Oshanyira Zimbabwe, Malawi neZambia
Gumiguru 03, 2011
Mutungamiri weAnglican Church pasi rose, Doctor Rowan Williams, vari kutarisirwa kushanyira nyika nhatu dzemu Africa kutanga musi wa 5 kusvika 13 Gumiguru. Va Williams vachashanyira Zimbabwe, Malawi neZambia.
Mukushanya kwavo muZimbabwe, VaWilliams vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe. VaWilliams vakanyorera VaMugabe tsamba vachivakumbira kuti vaite musangano navo apo vanenge vari muZimbabwe.
VaWilliam vari kuda kuti vakurukure naVaMugabe pamusoro pematambudziko ari kusangana nevanhu vechitendero chavo muHarare Diocese zvichitevera kupatsanurwa kwakaitwa chechi iyi. Pari zvino rimwe divi riri kutungamirwa naVa Nolbert Kunonga, rimwe naVa Chad Nicholas Gandiya.
Mutauriri waVa Williams, Muzvare Marie Papworth, vanoti pari zvino hofisi yavo ichakamirira kunzwa kubva kuhofisi yaVa Mugabe kuti Va Williams vachapihwa here kana kuti kwete mukana wekusangana naVaMugabe.
Va Williams, avo vachatanga vasvika ku Malawi vasati vaenda ku Zimbabwe, vachapinza misa muHarare yevatenderi vari pasi pe Church of the Province of Central Africa inotungamirirwa naVa Gandiya.
Ukuwo divi raVa Kunonga riri kuti Va Williams vanofanira kusanganawo navo pavari kuuya ku Zimbabwe. Studio7 haina kukwanisa kubvunza VaWilliam kana vachachinja moyo wavo vosangana nedivi raVaKunonga.
Hurukuro naVa Bishop Alfred Munyanyi